aungaung၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
MaleKLANG MERUMalaysia Like5members like this
ဘလော့များ (756)ဆွေးနွေးချက်များ (57)အဖွဲ့များ (12)ဓါတ်ပုံများ (23)Photo Albumsဗွီဒီယိုများ (30) aungaung's Likes အက်မင်များ၏မေးခွန်းလွှာများ(မုသားမသုံးရန်)
အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ
ဒီဘလော့ကို March 28, 2013 တွင်12:28am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
ဆားတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးပညာဏိက ၏ ထိ-သိ-သတိ
ဒီဘလော့ကို March 28, 2013 တွင်12:21am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဒီဘလော့ကို March 23, 2013 တွင်12:16am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments
ဒီဘလော့ကို March 23, 2013 တွင်12:14am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
ဒီဘလော့ကို March 23, 2013 တွင်12:10am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဆရာတော် အသျှင်ဇာဂရ မထေရ် မြတ်၏ ဓမ္ဓ ကျမ်းစာများ
ဒီဘလော့ကို March 16, 2013 တွင်1:04am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို March 16, 2013 တွင်12:59am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဝိနိစ္ဆယ ကျမ်းစာအုပ်များ
ဒီဘလော့ကို March 16, 2013 တွင်12:56am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို March 16, 2013 တွင်12:53am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို March 16, 2013 တွင်12:51am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
အားလုံးကြည့်ရန်... aungaung's ၏ဓါတ်ပုံများ
အားလုံးကြည့်ရန်... Gifts Received (2)
ပဋ္ဌာန်းပါဋိတော် Added by aungaung 1 Comment
ရေ တစ် ဗွက် မျှ ဘ ဝ : Added by aungaung 1 Comment
Metta Sutta အရပ်(၁၀)မျက်နှာ မေတ္တာပို့ Added by aungaung0Comments
သာမညဆရာတော်ကြီးမေတ္တာပို့ - YouTube_2 Added by aungaung0Comments
မေတ္တာပို့Added by aungaung 1 Comment
Angledaewi commented on aungaung's blog post 'ဘ၀ပီတိ နဲ့ ဓမ္မပီတိ'"သာဓု သာဓုသာဓု ပါဘုရား။"မနေ့ကပြုလုပ်သွားပါသည်။ကလေးတို.ဆရာမ leftacomment for aungaung"နေကောင်းရဲ့လား“အောင်အောင်“ ရေ-- ဆရာမအမြဲလိုလို သတိယနေတာပါ- လာမယ့် Interview အတွက်…"May 7mun mun aung liked aungaung's blog post 'အရဟံ ဦးဆင်'May 2aungaung သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။Apr 27ဓနုလေးဖိုးအော် liked aungaung's page စကားပြောရန်နေရာApr 24ကိုဖြိုး liked aungaung's blog post 'ကြာနီကန်ဆရာတော်၏mp3တရားခွေများ (၁ ) (၂ ) ( ၃ )'Apr 15dimplemit leftacomment for aungaung"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်…"Apr 9တာတာ liked aungaung's blog post 'ပဉ္စမမြောက်ကုသိုလ်'Apr6More... RSS
မြတ်စွာဘုရား ၏ တရားတော်တို့ကို နာကြားခွင့်ရသူ တို့သည် အလွန့်အလွန် ဘုန်းကံကြီးကြပါပေသည်။http://www.dhammaransi.com/
အရပ်ဆယ်မျက်နှာမေတ္တာပို့ ဘုရားပုံတော် မေတ္တာတရားတော် သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး၏မေတ္တာပို့ မေတ္တာပို့ တရားတော်ခန္ဓသုတ် ပရိပ်တန်ခိုးဆရာတော်ဦးနန္ဒမဉ္စူသာ၏မေတ္တာပို့ 
3:53pm အချိန်May 7, 2013, တွင်ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ နေကောင်းရဲ့လား“အောင်အောင်“ ရေ-- ဆရာမအမြဲလိုလို သတိယနေတာပါ- လာမယ့် Interview အတွက် ဆရာမတို. “အောင်အာင့်“ ကိုရွေးထားတယ်နော်-
တောသူမလေးက မေးခွန်းတွေ ပို.ပေးပါလိမ့်မယ် -
အားလုံး ဖြေပြီးရင် တောသူမလေးဆီပဲ ပြန်ပို.လိုက်ပေါ့နော်-
ဘန်ကောက်က လိုတာရှိလည်း မှာနော်- ဆရာမ ရောက်အောင် ပို.ပေးပါ့မယ်-
ရွှင်လန်းချမ်းမြ့ပါစေကွယ် 7:46am အချိန်April 9, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977 6:51pm အချိန်February 10, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:293069 5:51pm အချိန်January 22, 2013, တွင်Kyaw Zin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အခုလိုသတိတရနဲ့ comment ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။ At 3:04pm on March 04, 2012, ကလေးတို.ဆရာမ gave aungaungagift…Red RibbonWith Best Regards for all of our Buddhism .From the Gift Store At 1:49am on October 13, 2011, သီရိ gave aungaungagift…Red Ribbonကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများပြည့်ပါစေ...
သာသနာ့အကျိုးဆထက်ထမ်းပိုးနိုင်ပါစေ...နော်...From the Gift Store မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
Top News · Everything Thaung Tan liked dimplemit's blog post 'ဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင်ဝယ်'21 minutes agothein wai posted blog postsရဟန္တာဖြစ်လျက် ဆွမ်းတစ်နပ်မှ ၀အောင် မဘုန်းပေးရခြင်း အကြောင်း။“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။51 minutes agoမူကြိုဆရာ posted blog posts“သက္ကာယဒိဋ္ဌိ အရင်ဖြုတ်ပါ”ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာမေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း9 more…3 hours agopadout liked dimplemit's blog post 'အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ'3 hours agoMay June shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebook(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်3း hours agomun mun aung liked ကိုညီညီတင်'s blog post '“ဇေတ၀န်မြေ၀ယ်ယူစဉ်က ..ကိစ္စ”'3 hours agomun mun aung liked dimplemit's blog post 'အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ'4 hours agopadout liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြား သိမှတ်ရာ၌ နည်းသုံးဖြာဆိုတာ ဘာလဲ'4 hours agoမြူနှင်းမှုံ liked Thaung Tan's blog post 'တစ်ရက် နဲ့တစ်ရာ'4 hours agoမြူနှင်းမှုံ liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ဒီနေ့လည်း လွန်ဆွဲဦးမယ်'4 hours agoမြူနှင်းမှုံ liked thein wai's blog post 'လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။'5 hours agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ပွားများ မှတ်သားသေးသလား5 hours ago More... RSS